Mpaminany - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Mpaminany sandoka)
Ny mpaminany dia olona manana fahafahana hamantatra ny zava-kitranga amin' ny hoavy amin' ny alalan' ny tsindrimandry ka manambara izany mialoha amin' ny alalan' ny teny ampitainy mivantana na ny soratra ataony. Ao amin' ny Baiboly dia tsy ny fahalalana ny hoavy fotsiny no iandraiketan' ny mpaminany fa ny fitenenana amin' ny anaran' Andriamanitra hampita ny hafany ka mety hitsikera ny zava-dratsy misy eo amin' ny fiarahamonina sy ny fivavahana ary ny fitondram-panjakana mba hanarenana izany amin' ny alalan' ny fanambaràny koa ny tokony hatao. Ny mpaminanin' ny fivavahana iray anefa dia mety hampangain' ny fivavahana hafa mifanohitra aminy ho mpaminany sandoka.
Amin' ny ankapobeny dia tsy mitovy amin' ny ombiasa ny mpaminany noho izy tsy milaza fa tsy azo ihodivirana ny zavatra avoakan' ny faminaniany. Miteny ny mpaminany mba hampiova fomba fijery sy famindra ireo izay mihaino azy sady tsy amin' ny alalan' ny fanambaràna ny hevitry ny famantarana azo tsapain-tanana (karatra filalaovana, fomba fanidin' ny vorona, fanaovana antsapaka, fahamamoana, fisikidiana sns.) no anaovany izany.
Hetsehin' Andriamanitra sady miasa amin' ny anaran' Andriamanitra ny mpaminany ka mety hifanohitra amin' ny hevitry ny mpiara-belona aminy izy noho izany. Indraindray dia mety hoheverin' ny olona ho mpanohitra ny fahefam-panjakana misy izy.
Ao amin' ny fivavahana jiosy ny mpaminany dia manambara ny zava-doza mety hitranga tokoa raha tsy miova fitondran-tena ny vahoaka, ary ireo mpaminany ireo dia mampiseho famantarana sy fahagagana mba hinoana izay voalazany.
Amin' ny Kristiana dia zavatra iray ihany ny fahitana sy ny faminaniana ao amin' ny vahoakan' Andriamanitra. Ny Fanahy izay mitsoka amin' izay itiavany azy dia mahatonga ny olona rehetra ho afaka haminany ka hiteny amin' ny anaran' Andriamanitra, na dia ny tsy Kristiana koa aza indraindray.
Ao amin' ireo Manikeista dia dimbin' i Jesoa i Maný (na Manika) sady mpaminany farany.
Ao amin' ny Silamo dia mpaminany farany i Mohamady, amin' ny maha olona voatsindrimandrin' Andriamanitra azy, ao amin' ireo lahatsoratra miresaka momba ny fivavahana silamo.
Ao amin' ny Olomasin' ny Andro Farany dia atao hoe mpaminany koa ireo filohan' ny fivavahany ka isan' izany i Joseph Smith sy ireo mpandimby azy, araka ireo soratra miresaka momba ny môrmônisma.
Amin' ny ankapobeny dia atao hoe mpaminany ny olona rehetra izay manao fanambaràna mialoha ny zavatra hiseho izay heverin' ny olona anambaràny izany fa tsy azon-tsaina mialoha.
1 Ny mpaminany araka ny jodaisma
1.1 Ny mpaminany namela soratra
1.2 Ny mpaminany tsy namela soratra
2 Ny mpaminany amin' ny kristianisma
2.1 Mpaminany ao amin' ny Baiboly
2.1.1 Mpaminany ao amin' ny Testamenta Taloha
2.1.2 Mpaminany ao amin' ny Testamenta Vaovao
3 Ny mpaminany amin' ny Silamo
3.1 Mpaminany hebreo
3.2 Maminany arabo
Ny mpaminany araka ny jodaismaHanova
Ny mpaminany namela soratraHanova
Atao hoe נביאים / Nevi'im na Nebhi'im ("mpaminany (maro)") ny mpaminany amin' ny teny hebreo. Anarana anondroana ny fizaràna faharoa ao amin' ny Baiboly jiosy amin' ny teny hebreo (na Tanakh) koa ny hoe Nebhi'im na Nevi'im, aorian' ny fizaràna atao hoe Torah ("Lalàna", na Pentateoka), ary eo alohan' ny fizaràna atao hoe Ketuvim ("Soratra"). Ny boky nosoratan' ny mpaminany lazaina araka ny lovantsofina jiosy fa nanoratra no avondrona amin' io anarana hoe Nevi'im io. Ireo mpaminany nanoratra ireo dia sokajina ho mpaminany taloha (hebreo: נביאים ראשונים / Nevi'im Rishonim) sy mpapinany taoriana (hebreo: נביאים אחרונים / Nevi'im Aharonim) . I Mosesy na Môizy, izay lazaina fa mpaminany lehibe indrindra, dia ataon' ny lovantsofina jiosy fa nanoratra ny Torah (ny boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly), nefa tsy isaina ao amin' io atao hoe Nevi'im io. Matetika ireo mpaminany ireo dia tsy mankasitraka ny fahefana ara-pôlitika fa mitsikera na manohitra azy.
Ireto avy ireo mpaminany ireo: Jôsoa, i Samoela, i Isaia, i Jeremia, i Ezekiela, ireo mpaminany madinika roa ambin' ny folo (i Hôsea, i Jôela, Amôsa, Ôbadia, i Jônà, i Mikà, i Nahoma, i Habakoka, i Zefania, i Hagay, i Zakaria, i Malakỳ). Marihina fa na dia lazaina araka ny lovantsofina fa nanoratra bokim-paminaniana i Daniela dia tsy voasokajin' ny Jiosy ho isan' ny mpaminany.
Ny mpaminany tsy namela soratraHanova
Tsy ireo fotsiny noho izany no mpaminanin' i Israely fa maro. Ny teny hoe נביא / nabī anefa dia manana hevitra hafa izy midika hoe "mamokatra". I Abrahama no mpaminany voalohany voalaza ao amin' ny Torah. Ireto avy ireo mpaminany hafa ireo: i Abrahama, i Aarona, i Mosesy, i Eldada, i Medada, i Gada, i Natàna, i Ahia avy any Silo, i Jeho, i Elia, i Elisa, Jeedo, i Semaia, i Ido, i Ôbeda, i Ôdeda, i Asafa ary i Oria. Ireto ny mpaminany vavy: Miriama (anabavin' i Mosesy sy Aarona), i Debôra, i Holda ary i Nôadia.
Ny mpaminany amin' ny kristianismaHanova
Mpaminany ao amin' ny BaibolyHanova
Mpaminany ao amin' ny Testamenta TalohaHanova
Raisin' ny Kristiana ho mpaminaniny ny mpaminany rehetra eken' ny jodaisma ao amin' ny Testamenta Taloha (izay ataon' ny Jiosy hoe Tanakh). Ireo mpaminany nanoratra dia voasokajy ho mpaminany lehibe sy mpaminany madinika ao amin' ny Kristianisma, ka mpaminany lehibe i Isaia sy i Jeremia sy i Ezekiela ary i Daniela; fa mpaminany madinika kosa i Hôsea, i Jôela, Amôsa, Ôbadia, i Jônà, i Mikà, i Nahoma, i Habakoka, i Zefania, i Hagay, i Zakaria, ary i Malakỳ.
Mpaminany ao amin' ny Testamenta VaovaoHanova
Ny fanomezam-pahasoavana haminany dia tsy voafetra tao amin' ny Testamenta Taloha fa nitohy tamin' ny andron' ny Apôstôly, araka ny Testamenta Vaovao. Ireto avy ny mpaminany resahina ao amin' io ampahany faharoa amin' ny Baiboly kristiana io:
I Joany Mpanao Batisa (ilay nanao batisa an' i Jesoa, ary lazaina fa ny lehibe indrindra amin' ny mpaminany), ny mpaminany vavy Ana na Estera (araka ny Lioka 2.36-38); i Agabo (araka ny Asan' ny Apôstôly 21.10), i Joda sy i Silasy (Asa 15.32), olona maro hafa koa tao amin' ny fiangonan' i Antiôkia toa an' i Barsabasy sy i Simeôna atao hoe Nigera sy i Lokiosy avy any Kirenio sy i Menahema izay nobeazin' i Herôda Tetrarka, ary i Saoly (Asa 13.1), i Jesoa tenany koa dia nanao faminaniana maro. Ny mpanoratra ny Apôkalipsy koa dia nanao faminaniana maro. Ny mpaminany vavy dia i Ana sy ireo zanaka vavin' i Filipo efatra.
Ny mpaminany amin' ny SilamoHanova
Ao amin'ny finoana silamo dia atao hoe mpaminany ireo patriarka roa ambin'ny folo ao amin'ny Baiboly sy ny olona hafa manana ny maha izy azy ary i Mohamady (izay atao hoe "tombokasen'ny mpaminany"). Miisa 25 ny mpaminany resahina ao amin'ny boky Kor'any, misy hadita iray izay miresaka fa ny firenena tsirairay teo amin'ny tantara dia nahazo mpaminany iray fara fahakeliny ka ny totalin'izy rehetra dia 124 000. Araka ny Kor'any dia i Adama no mpaminany voalohany. Ny lehibe indridra, ankoatr'i Mohamady, dia i Noa, i Abrahama, i Davida, i Solomona ary i Jesoa.
Miresaka ny amin'ny hafatra (rasûl) sy mpaminany (nabî), ka ny sasany amin'ireo dia resahina koa ao amin'ny Baiboly nefa tsy ataon'ny Jiosy na ny Kristiana hoe "mpaminany" fa patriarka ("razana"). Ao amin'ny soràta faha-21 ("Ny Mpaminany") sy faha-4 ("Ny Vehivavy") ary faha-3 (ʿImran) dia misy olona tanisaina ho isan'ny "olo-marina".
Ireto avy ireo Hebreo resahina ao amin'ny Tanakh (na Testamenta Taloha) isain'ny Silamo ho mpaminany: i Adama (arabo: آدم / Âdam), i Enoka (إدريس / Idrîs), i Noa (نوح / Nûh), i Abrahama (إبراهيم / Ibrâhîm), i Ismaela (إسماعيل / Ismâʿîl), i Lota (لوط, / Lût), i Isaaka (إسحاق / Ishâq), i Jakoba (يعقوب /Yaʿqûb), Josefa zanak'i Jakoba (يوسف / Yûsuf), Joakima rain'i Miriama (2 عمران /ʿImran), i Mosesy (مُوسَى / Mûsâ), i Aarona (هارون / Hârûn), i Joba (أَيّوب / Ayyûb), i Jonà (يونس /Yûnas), i Solomona (سُلَيْمان, / Sulaymân), i Davida (داوود, / Dâwûd), i Elia (إِلْيَاس / Ilyâs), i Elisa (اليَسَعَ / al-Yâsʿa), i Ezekiela (ذَو الكِفْل / Dhû'l-Kifl) ary i Ezra (عزير / ʿUzair). I Lokmàna (لقمان / Luqman) koa dia mpaminanin'ny finoana silamo manam-piaviana hebreo nefa tsy reszhina ao amin'ny Testamenta Taloha. Ireto kosa ny olona resahina ao amin'ny Testamenta Vaovao izay ataon'ny Silamo fa mpaminany: i Zakaria rain'i Joany (زَكَرِيَّا / Zakarîyâ) sy i Joany mpanao batista (يحْيى / Yahyâ) ary i Jesoa (عِيسى /ʿIsâ).
Ny mpaminany arabo dia i Hoda (هود / Hûd), i Jetro mpaminanin'ny Madiana sady rafozan'i Mosesy (شُعَيْب / Shuʿayb), i Salihy mpaminanin'i Tamoda (صالح / Sâliḥ), ary i Mohamady (محمد / Muḥammad).
Nevi'im (Mpaminany, sokajim-boky ao amin' ny Baiboly hebreo)
"Ny mpaminany sandoka araka ny Testamenta Taloha" ao amin'ny Literatiora kristiana (FLM)
↑ Xavier Léon-Dufour, Vocabulaire de Théologie biblique, Paris, Éditions du Cerf, 1971, 1404 p., p. 1046-1057
↑ Geoffrey Wigoder, Sylvie Anne Goldberg : Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Éditeur : Laffont; Collection : Bouquins, 1997, (ISBN 2221080998)
↑ André Neher : Prophètes et prophéties, Ed.: Payot-poche, 2004, (ISBN 2-228-89834-1)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mpaminany&oldid=1037510"
Dernière modification le 6 Septambra 2021, à 13:46
Voaova farany tamin'ny 6 Septambra 2021 amin'ny 13:46 ity pejy ity.